घनश्याम ढकाल प्रगतिवादी नेपाली साहित्यिक धरातलका एक स्थापित साहित्यकार । कथा , उपन्यास र समालोचनालाई प्रमुख लेखन विधाका रुपमा अगाडि बढाउनुहुने साहित्यकार ढकाल कविता र निबन्धमा पनि सशक्त कलम चलाउनुहुन्छ । वि.स. २०१० माघ १४ गते माता कौशल्या र पिता प्रभाकर ढकालका पुत्ररत्नका रुपमा स्याङ्जाको पुतलीबजार- ८, सतौंमा जन्मनुभएका घनश्याम ढकाल विगत लामो समयदेखि पोखरामा रहेर साहित्यिक कर्ममा क्रियाशील हुनुहन्छ ।
घनश्याम ढकाल (२०१०-२०६८) २०२६ सालतिरै निबन्ध लेखनबाट साहित्य यात्रामा तातेताते गर्न थाल्नुभएका ढकालले २०४२ मा 'नाम कमाउने रहरमा' नामक निबन्धसङ्ग्रह प्रथम कृतिका रुपमा नेपाली साहित्यका पाठकहरुलाई दिनुभयो । त्यसपछि फैसला हारजीतको (कविता चर्चा २०४४), दरिद्रताबाट मुक्ति (निबन्ध २०४५) भरिया र यात्री (कथा २०४६), गाउँभित्र (उपन्यास २०४७), मानचित्रमा नपरेको सहिद ( कथा २०४८) , समर्पणको बाटोमा (कथा २०५१) , मार्क्सवादी सौन्दर्यशास्त्रको विवेचना (समालोचना २०५४) , आजको महाभारत (कथा २०५५) रातो आकास (उपन्यास २०६०) र भावनाका छालहरु (२०६२) गरी झण्डै एक दर्जन कृतिहरु क्रमश: पस्कनुभएको छ । यथार्थवादी नेपाली समालोचना, कलम, गण्डकी संगमजस्ता साहित्यिक पत्रिका तथा पुस्तकहरु सम्पादनकार्यमा समेत सक्रिय व्यक्तित्व ढकाल गण्डकी साहित्य सङ्गम, अखिल नेपाल लेखक सङ्घ र विजय ढकाल सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुका साथै प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहन्छ । पोखरामा रहेर राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो पहिचान बनाउन सफल साहित्यकार ढकालको साहित्यिक योगदानको कदर गर्दै विभिन्न सङ्घसंस्थाले पारिजात सिर्जनशील पुरस्कार, साहित्य सन्ध्या पुरस्कार २०६३, मनकुमारी - केदार शर्मा प्रतिभा पुरस्कार २०६५ जस्ता पुरस्कार/सम्मानले अभिनन्दन पनि गरेका छन् भने नेपाल सरकारले दिने राष्ट्रिय प्रतिभा परस्कार २०५१ उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । प्राध्यापन पेसाको कमाइबाट जीविकोपार्जन गर्दै आजीवन साहित्य साधना र खास गरी कथामा क्रियाशील साहित्यकार घनश्याम ढकालसँग कोसेली साहित्यिक पत्रिकाको कथा विशेषाङ्क (२०६५) का लागि कथाकै सेरोफेरोमा रहेर रुपिन्द्र प्रभावीले लिनुभएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
# कथा के हो ? o समग्र जीवनको खण्डको चित्रण हो ।
# कथा र उपन्यासबीचको भिन्नता के छ ?
कथाले जीवनको सानो खण्डको चित्रण गर्छ, उपन्यासले बृहत् जीवनको चित्रण गर्छ ।
# कथालाई लामो बनाउँदा उपन्यास र उपन्यासलाई छोट्याउँद कथा बन्छ कि बन्दैन ?
त्यस्तो हुँदैन । यी दुवैका विधागत वैशिष्ट्यहरु छन् ।
# यहाँ लामो समयदेखि कथा लेखनमा क्रियशील हुनुहुन्छ । यहाँले कथा लेखनारम्भ गर्दाको समयको र अहिलेको कथालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
o कथाको विकासक्रम व्यापक हुँदै छ । कथामा विभिन्न प्रवृत्तिहरु टक्कर गरिरहेका छन् । प्रगतिशील धारले नेपाली साहित्यको नेतृत्व गरिरहेको छ । सुरुमा कथा कमजोर नै थियो , समय पनि त्यस्तै थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि यसले अझ व्यापकता पाएको छ यद्यपि अरु विधाको तुलनामा कथाको विकास हुनपर्ने जति हुन सकेको छैन ।
# नेपालीसाहित्यका यौनमनोविश्लेषणबादी कथाकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीजस्ता कथाकारहरुबाट यहाँ कति प्रभावित हुनुहुन्छ ?
o विश्वेश्वरको यौनवादबाट म प्रभावित पनि छैन र कहिल्यै पनि भइनँ, गुरुप्रसादको प्रवृत्तिबाट भने मैले शिक्षा लिएकै हुँ ।
# साहित्यमा आदर्श कति हुनुपर्छ ?
आदर्श हुनुपर्छ तर आदर्शवाद हुनुहुँदैन । आदर्शवाद प्राच्यवादी प्रवृत्ति भएकोले मैले स्वीकार गर्दिनँ ।
# तर गुरुप्रसाद मैनालीको आदर्शवाद त जनताले मन पराए नि ?
o गुरुप्रसादको आदर्शवादमा जनविरोधी तत्व छैन, उनको आदर्शमा यथार्थ मिसिएको छ । यथार्थोन्मुख आदर्शवाद भएकोले जनताले मन पराएका हुन् ।
# एक पटक फेरि पछि फर्कन चाहन्छु, कथा हुनका लागि आवश्यक तत्वहहरु के के हुन् ?
o कथानक, शैली, भाषा, जीवन र जगतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको प्रतिबिम्व हुनुपर्छ । वैचारिक दृष्टिकोणको दर्‍हो उपस्थितिले कथालाई पूर्ण बनाउनुपर्छ ।
# विचार भन्नाले राजनीतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
o विचार भन्नाले राजनीतिमा मात्रै घटुवा गर्नुहुँदैन । विश्वदृष्टिकोण, आर्थिक परिवर्तन, विचार आदि हुन सक्छन् । यथार्थ चित्रण गर्दा राजनीति पनि आउन सक्छ।
# कति आउनु पर्छ राजनीति ?
o कति आउनुपर्छ, कति पर्दैन भन्ने कुरो कथाकारमा भर पर्छ । मूल कुरो राजनीतिले कथालाई खानुहुँदैन । राजनीतिक कथा पनि लेखिन्छ तर राजनीतिक विषयवस्तुलाई कलात्मक र विचारात्मक ढङ्गले लेख्नुपर्छ।
# कथा लेख्दा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो ?
o मुल कुरो त सौन्दौर्यदृष्टि हो । पक्षधरता, भाषाशैली आदि ध्यान दिनुपर्छ।
# साहित्यले समाजको चित्रण गर्छ ?
o समाजशास्त्रीय धारणाले साहित्यलाई समाजको ऐना भन्छ तर म ऐना मात्रै हो मन्नेमा सहमत छैन । साहित्यले समाजका कुरा फोटोका रुपमा हैन, पुनः सिर्जनाका रुपमा आफ्नो कला, कल्पना, विचार र भाषाशैलीअनुरुप व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
# नेपाली कथाको विगतदेखि वर्तमानसम्मको गति कुन रुपमा अघि बढेको छ ?
o ठ्याक्कै समालोचकीय बनिबनाउ जवाफ दिन कठिन छ । नेपाली कथामा विभिन्न धारा र प्रवृत्तिहरुमा कथा लेखिँदै आएका छन् । कथा साहित्यको गतिमा मलाई सन्तोष छैन । गति नै रोकिएको हैन तर जति विकास हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन ।
# के कारण होला यसको ?
एउटा त विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले पनि असर पारेको छ भने मान्छे बढी व्यस्त रहने परिवेशले पनि कथामा घोत्लिने समयको कमी छ र मुख्य कुरो दृष्टिकोणको पनि समस्या छ।
# कथाकारहरुको संस्था पनि कम छ हगि ?
o कथा सबभन्दा बढी पढिने विधा हो तैपनि जीवन र जगतलाई प्रतिबिम्बित गर्ने चाहना नभएको छोटो र सजिलो विधातर्फ आकर्षित भएका कारण पनि कथाकारहहरुको संस्था सन्तोषजनक छैन।
# कथा लेख्दा दुःख बढी हुने प्राप्ति कम हुन सक्छ । यसप्रति राज्यसत्ता दोषी छ कि छैन ?
o प्राप्तिलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ- आर्थिक र मान/सम्मान तर साहित्यिक प्राप्ती तत्काल हुने कुरा होइन । राज्यसत्ताको पनि कमजोरी छ। वातावरण व्यवस्थापन र उचित मान/सम्मान दिन नसक्न राज्यको दोष हो तर मूल कुरो लेखक नै हो । अझ लेखकहरुमा अन्तर्वस्तुको सङ्कट र वैचारिक दष्टिकोणको कमीले कथा कम लेखिएको हो ।
# कथाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
o भविष्य आशालाग्दो छ । विविध प्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले कथाहरु लेखिएका छन्। यसले सुनिश्चित भविष्यको सङ्केत गर्छ ।
# नेपाली कथा र अन्तर्राष्ट्रिय कथा बीचको भिन्नता कस्तो पाउनुहुन्छ ?
o अत्यन्त गम्भीर र जटिल प्रश्न गर्नुभयो। अन्तरराष्ट्रिय कथाको स्तरमा हाम्रा कथाहरु पुग्न सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कथामा जुन ढङ्गले जीवनको व्यापक र जटिल सूक्ष्म प्रतिबिम्बित हुन्छ, हाम्रोमा त्यो छैन। ।
# यसमा केको कमजोरी हो ?
o शैलीभन्दा विषयवस्तु र दृष्टिकोणको कमजोरी हो। जीवन र जगतलाई गम्भीर दृष्टिकोणले नियाल्ने र पुनः सिर्जनाको समस्या हो।
# नयाँ पुस्ता कथाप्रति आकर्षित हुन नसक्नुको कारण के होला ?
o आइरहेका छन् तर आउनुपर्नेजति अएका छैनन् । अरु विधाका तुलनामा कमी छ, यसका विविध कारणहरु अगाडि पनि चर्चा गरियो।
# नेपाली कथाको विकासमा कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
o मूल करो लेखक नै हो । राज्यले पनि न्यूनतम वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जीवन र जगत्लाई सही र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले नियालेर लेखकले पुनः सिर्जना गर्नुपर्छ।
# यहाँले पुनः सिर्जनाको कुरा पटक पटक उठाइरहनु भएको छ । नेपाली साहित्यमा पछिल्लो समयमा बहसको विषय बनिरहेको उत्तरआधुनिकतावादले पनि पुनः सिर्जनाको कुरा गर्छ भनिन्छ । तपाईँले यसैलाई पृष्ठपोषण गरिरहनुभएको हो ?
o उत्तरआधुनिकतवादले पुनः सिर्जनको कुरा गर्दैन। यसले त एक किसिमको ध्वंसको कुरा गर्छ । मैले ध्वांसको अर्थमा हैन, यथार्थको पुनः सिर्जनको कुरा गरेको छु।
# यहाँ प्रगतिवादी साहित्यमा क्रियाशील हुनुहन्छ । उत्तरआधुनिकतावाद र प्रगतिवादको तुलना गरौं न ?
o यी दुईको त तुलना हुनै सक्दैन । उत्तराधुनिकतवाद मार्क्सवादको विरोधी धाराका रुपमा अगाडि
बढेको छ, यसले केन्द्रीय विचारको अन्त, महाख्यानको अन्त जस्ता धारणा लिएर आएको छ । यसले मार्क्सवादी चिन्तनलाई प्रहार गरिरहेको छ। सत्य, न्याय, सार्वभौम विश्वव्यापी हुँदैन भन्छ र साम्राज्यवादको सांस्कृतिक पक्षलाई खण्डित गर्छ । यी सबैको विरोध प्रगतिवाद हो । त्यसैले यी दुई विपरीत धार हुन् ।
# तर उत्तरआधुनिकतावादीहरु यसलाई मार्क्सवादको विरोध हो भन्नु भ्रम हो भन्छन् नि ?
o भ्रममा उत्तरआधुनिकतावादीहरु छन् । यसका मान्यताले नै प्रगतिवादको विरोध गरिरहेको छ भने विरोध हैन भन्नु भ्रम हो । यसले सत्य , न्याय, प्रजातन्त्र , जनवाद , समानता यी सबैको सार्वभौम चरित्र हन्न भन्ने व्याख्या गर्छ । उत्तरआधुनिकतावादको आधारशीला भनेको डेरिडाको विखण्डनवाद पनि हो । यसले यी सबैलाई विखण्डन
# कथा किन लेख्नुहुन्छ ?
o म उद्देश्यपूर्ण ढङ्गले लेख्छु । असुन्दर सामाजिक जीवनलाई सुन्दर रुपान्तर गर्न र सामाजिक क्रान्ति गर्ने सन्देश पनि दिन्छु ।
# कथामा कल्पना बढी हुनुपर्छ कि यथार्थ ?
o यथार्थालाई प्रष्ट पार्न कल्पना हुनुपर्छ , कल्पना भन्नाले स्वैरकल्पनाभन्दा समाजमा घट्न सक्ने यथार्थको कल्पना गरिनुपर्छ। ।
# यहाँको पहिलो प्रकाशित कथा कुन हो ? कुन पत्रिकामा छापिएको थियो ?
o 'वारुणयन्त्र' भन्ने कथा पोखराबाट प्रकाशित 'हिमाली आवाज' भन्ने पत्रिकामा पहिलो पटक प्रकाशन भएको हो।
# यहाँलाई मन पर्ने कथाकारहरुको नाम लिनुपर्दा ?
o खासगरी प्रगतिशील कथाकारहरु मनपर्छ नै । नामै लिनुपर्दा पारिजात, गुरुप्रसाद मैनाली नेपाली कथाकारहरुमा पर्छन् भने अन्तर्राष्ट्रियमा चेखव, गोर्की , लुसुन आदि मन पर्छन्।
# कथामा यौन विषयको समावेशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ
o आउन सक्छ । मूल कुरो विषय के लिइन्छ भन्ने मुख्य होइन । विषयलाई कुन उद्देश्यले समावेश गरिन्छ भन्ने मुख्य हो त्यसैले जुनसुकै विषय लिन सकिन्छ।
# प्रगतिवादीहरु त यौनविषयक साहित्यलाई घृणा गर्छन् नि ?
o पूरै यौनलाई घृणा गर्दैनन् , छाडा यौनलाई घृणा गर्छन् । यौन पनि जीवनको एक पाटो भएकोले मर्यादित ढङ्गले आउन सक्छ।
# साहित्य मनोरञ्जनका लागि लेखिनुहुन्छ कि हुँदैन ?
मनोरञ्जनका लागि मनोरञ्जनमात्रै साहित्यमा हुनुहुँदैन । त्यसले कुनै वर्गीय हित गर्नुपर्छ।
# पाठकहरुको आकर्षण त मनोरञ्जन दिने साहित्यमै बढी छ ?
o राज्यको कमजोरीले पनि यस्ता साहित्यले बजार ढाकेको हो। स्वस्थ र सभ्य मान्छेले अश्लील साहित्य नै मन पराउँछन् भन्ने होइन । खराब कुराको प्रतिकार नभएसम्म क्षेत्र ढाक्छ।
# पोखरेली साहित्यमा कथाको स्थिति कस्तो छ ?
o अरु विधाजति सशक्त छन्, तिनीहरुको तुलनामा कथाको उन्नति हुन सकेको छैन ।
# पोखरामा थुप्रै संस्थाहरु साहित्यिक उत्थानका लागि क्रियाशील हुँदा हुँदै पनि यस्तो स्थिति कायम छ जहाँ संस्थाहरु छन् तर कथाकार जन्माउन असक्षम । कथाकार जन्माउन ती संस्थाहरुले के गर्नुपर्छ ?
o कथा लेखकहरुलाई प्रोत्साहान गर्नुपर्छ । गद्य लेखनमा आकर्षण गर्नुपर्छ । कथासम्बन्धी गोष्ठी, अन्तरक्रिया र प्रतियोगिताहरु हुनुपर्छ ।
# यहाँ स्वयम् पनि केही संस्थाहरुको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ कथाको उन्नयनका लागि यहाँको संस्थागत कुनै याजना छ कि ?
o कथा विधाकै विकासका लागि भनेर कुनै ठोस योजना त बनाइएको छैन तर गद्य लेखनलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।
# पोखरामा कथाको स्थितिलाई यहाँले झण्डै निराशाजनक चित्रण गर्नुभयो । कथाको विकासबिना प्रस्तावित साहित्यिक राजधानी पोखराले मूर्तरुप लिन सक्ला ?
o पोखरा राजधानी हो कि होइन भन्ने बहसकै कुरा हो। कथाबिनाको राजधानी हुनै सक्दैन।
# यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले कथाको विकासका लागि के कस्तो भूमिका खेलेका छन् ?
सञ्चारले साहित्यलाई पर्याप्त महत्त्व दिन सकेको छैन । समग्र नेपालकै परिवेशमा यहाँको सञ्चार माध्यमले अरु विधालाई केही हदसम्म टेवा पुयाए पनि कथाको विकासमा भूमिका खेलेको पाइँदैन ।
# पोखरमा रहेर कथा साहित्यमा साधनारत केही कथाकार का नाम लिनुपर्दा ?
o प्रगतिवादीइतर धारमा सरुभक्त राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित नाम हो भने प्रगतिवादी धारमा भवानी पाण्डे 'भास्कर', परशुराम कोइरालाजस्ता प्रतिभाहरु छन्।
# वर्तमान सन्दर्भमा कस्ता कथाहरु लेखिनुपर्छ ?
कथामात्र हैन, साहित्य जीवन र जगत्सापेक्ष हुनुपर्छ । कथा कथाका लागि मात्र नभई सूक्ष्म ढङ्गले यथार्थको प्रतिबिम्बन गरी जीवन र जगत्लाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यमूलक ढङ्गले लेखिनुपर्छ । विविध प्रवृत्तिका कथाहरु आउनुपर्छ तर युगको प्रतिनिधित्व प्रगतिवादी धारका कथाले मात्र गर्न सक्छ । कथाले कुप्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ ।
# अन्तमा केही ?
o बागलुङबाट प्रकाशित कोसेलीले कथाजस्तो गहन साहित्यिक विधागत विशेषाङ्क प्रकाशन गर्न लागेको सुन्दा अत्यन्त खुसी लागेको छ । यस्ता सत्कार्य हुनुपर्छ , यस्ता सत्प्रयासहहरु भइरहनुपर्छ । मलाई आफ्ना विचार राख्न अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
कोसेली, कथा विशेषाङ्क २०६५ बाट साभार
द्रष्टव्यः ढकालको २०६८ फागुन १ गते दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । ढकालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
शनिबार, फागुन १, २०७७, १०:३७:००
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न २३ मिनेट पहिले